အိပ်မက်အိမ်: ကိုးကွယ်မှုနဲ့ အသုံးချမှု အပေါ် ကျွန်မနဲ့ ကိုဖြိုးရဲ့ စကားဝိုင်း သုံးသပ်ချက်
ကိုးကွယ်မှုနဲ့ အသုံးချမှု အပေါ် ကျွန်မနဲ့ ကိုဖြိုးရဲ့ စကားဝိုင်း သုံးသပ်ချက်
ဒီနေ့ စည်းအပြင်က ကိုဖြိုးနဲ့ ချတ်ရင်း ရလာတဲ့ အတွေးစလေးတွေအကြောင်းပါ။ မြန်မာ ဘလော့ဂါ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လိုဂိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှုထောင့်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးရင်း နဲ့ လိုဂိုအကြမ်းဆွဲထားတာကို ကျွန်မက နိမိတ်ကောက်ပြပါတယ်။ သူက နိမိတ်ကို အယုံအကြည် မရှိဘူးလဲ မဟုတ်ပေမယ့် အားမကိုး လောက်လို့ မယုံချင်ဘူး လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်တွေကို လေးစားစွာ တန်ဖိုးထားရင်း ဆွေးနွေးဖြစ်ကြပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ အယူတော် မင်္ဂလာ နိမိတ်ကျမ်းတို့ ဗေဒင်တို့ကို အားကိုးဖို့ ယုံကြတာ မဟုတ်ကြောင်း၊ အသုံးချဖို့ ဆန်းစစ်တာ သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗေဒင်ပညာနဲ့ နိမိတ်ကောက် အတတ်ပညာ တွေဟာ အားကိုး စရာ အဖြစ် ကိုးကွယ်ဖို့ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်း အသုံးချစရာ ဖော်မြူလာ တစ်မျိုးသာ ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လှန် ပြောဆို ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ သည် နိမိတ်ကောက် ပညာတွေဟာ အသုံးချ တတ်ရင် ဆားပုလင်း နှင်းမောင် ၀တ္ထု ထဲက ဇာတ်လိုက်လို ဆက်စပ် စဉ်းစား တတ်ဖို့ အတွက်တော့ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါတယ် လို့ ဆွေးနွေး ပါတယ်။
နောက်တော့ကိုဖြိုးက တရားနဲ့ယှဉ်ပြပြီး ဆက် ဆွေးနွေး ပါတယ် .....
ဗုဒ္ဓ ဟောထား တာက ပစ္စုပ္ပန်ပဲ တည့် တည့် ကြည့်ခိုင်းတာဗျ အနာဂတ်ကို ကျော်မကြည့်ခိုင်းဘူးပေါ့လေ အတိတ်ကိုလည်း ပြန်မဆွေးခိုင်း ပါဘူး တဲ့ ။ ဟုတ်ပါတယ် တရားအားထုတ်တဲ့ နေရာမှာတော့ ပစ္စုပ္ပန်ပဲ တည့်တည့် ရှုခိုင်းတာ မှန်ပေမယ့် ကျန်တဲ့ နေရာမှာတော့ ရှေ့ရေးကို မြော်မြင်မှုကို ဘုရားက အားပေးပါတယ်။ ဘုရားကတော့ အနာဂတ်ကို ကြိုမြင် လို့ ဒေ၀ဒတ်ကို တံတွေးစားလို့ ကဲ့ရဲ့ပြီး နှင်ထုတ်တာ .. ဘုရားက အမြော်အမြင် ကြီးတာကို ခွင့်ပြုပါတယ် လို့ ကျွန်မက ပြန် ဆွေးနွေးပါတယ်။ သည်တော့ ကိုဖြိုးက ဗေဒင်ယတြာ ထိပ်ခေါင် ကောဏ္ဍည ပုဏ္ဏားကြီး တောင်မှ ဘုရားကို ကိုးကွယ် ခဲ့သားပဲ… ဘုရားက ဒေ၀ဒတ်ကို မကဲ့ရဲ့ပါဘူး… မင်းနဲ့ငါ အယူမတူတော့ဘူး မင်းဟာမင်း သတ်သတ်နေ လို့ပဲ ပြောတာပါ လို့ ကိုဖြိုးက ပြောပြန်ပါတယ်.. ဘလော့ဂါချင်း ပညာစမ်းပြီး တမင်ပဲ မေးတာ လားတော့ မသိပါ။ ကျွန်မကတော့ ဘုရားက ဒေ၀ဒတ်ကို တံတွေးစားသူလို့ ကဲ့ရဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကောဏ္ဍည ပုဏ္ဏားက ဘုရားကို ကိုးကွယ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ သူက ဗေဒင်ကို ခုခေတ် ကွန်ပြူတာ ပညာလို ထမင်းစား လက်မှတ် အဖြစ်ပဲ အသုံးချတာ ဖြစ်ပြီး ကိုးကွယ်စရာ မဟုတ်မှန်း သိတဲ့ အတွက် ဖြစ်ကြောင်း၊ အယူတော်မင်္ဂလာ ပဲဖြစ်ဖြစ် ဗေဒင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွမ်းကျင်မှုကို မကိုးကွယ်ဘဲ ပညာ တစ်ရပ်လိုပဲ အသုံးချဖို့သာ လိုကြောင်း ပြောဆို ဆွေးနွေးရင်း ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် သည်နေရာမှာ သဘော တူသလို ဖြစ်သွားခဲ့ ကြပါတယ်။ ဒေ၀ဒတ်က သက်သတ်လွတ် စားခြင်း အပါအ၀င် အချက် ငါးချက်ကို သံဃာကို ကျင့်ခိုင်းဖို့ တောင်းဆို တဲ့အခါ နဲ့ ဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အခါ သံဃာကို ဒေ၀ဒတ်က ကိုယ်စား ဘုရားအဖြစ် ဆက်လက် အုပ်ချုပ် ခွင့်ကို တောင်းတဲ့အခါ ဘုရားက ဒေ၀ဒတ်ကို တံတွေးစားသူလို့ ကဲ့ရဲ့ပြီး နှင်ထုတ်တာ ဒေ၀ဒတ်ရဲ့ သံဃာ ကို သင်းခွဲလိုတဲ့ အကြံကို သိလို့ရော၊ သည်အချက်တွေကို ခွင့်ပြုရင် သံဃာတွေ နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာ ကြာအောင် သာသနာ ပြုနိုင်မှာ မဟုတ်တာ ကြောင့်ရော သာသနာမှာ ညစ်နွမ်း ကြောင်းတွေ ဖြစ်လာ နိုင်တာ တွေကြောင့်ပါ စဉ်းစားမိလို့ ခွင့်မပြုဘဲ ဒီလို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြောဆိုရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနာဂတ်ကို မြော်မြင် နိုင်မှုဟာ သာသနာ အတွက်ပါ အရေးကြီး လှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနာဂတ်ကို သိမြင် မြော်မြင် နိုင်မှု အတွက် ဗေဒင်နဲ့ နိမိတ်ကောက် ပညာ ကိုချည့် အားကိုး နေစရာ တော့လဲ မလိုအပ် လှပါဘူး။ သည်ပညာတွေက ခက်ခဲနက်နဲ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အတွက်ရော အာရုံ စူးစိုက်မှု အားကောင်း ခြင်းပါ လိုအပ်တဲ့ အတွက် တော်ရုံလူက မှန်ကန်အောင် မကောက် တတ်တာလဲ ရှိနိုင် ပါတယ်။ အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုးကို ဝေဖန် ဆန်းစစ် နိုင်သူ ဟာလည်း အနာဂတ်ကို ကြိုတင် မှန်းဆ နိုင်တာ ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အတိတ်က လုပ်ရပ် အကြောင်း တွေကြောင့် ပစ္စုပ္ပန် အကျိုးဆက်တွေ ရသလို ပစ္စုပ္ပန်မှာ လုပ်တဲ့ အကြောင်းတရား ကြောင့်လဲ အနာဂတ်မှာ အကျိုးပေးမှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
ကောဏ္ဍည ပုဏ္ဏားရဲ့ ဗေဒင် ပညာကို အသုံးချ ပုံကိုတော့ ကျွန်မ သဘောကျ လှပါတယ်။ လက်တစ် ချောင်း သာ ထောင်ပြီး ဘုရားစစ်စစ် ဧကန် ဖြစ်မယ်လို့ ဟောတာကို သဘော မကျတဲ့ သုဒ္ဓေါဒန မင်းကြီး ရဲ့ နှင်ထုတ်မှု ခံရတဲ့အခါ သူဒီလို ဖြစ်မယ် ဆိုတာ သူ့ကိုယ်သူ ဗေဒင် တွက်ရင် သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗေဒင်သစ္စာ ကို စောင့်စည်းပြီး အမှန် အတိုင်း ဖြေပါတယ်။ သူဟာ ဒီဘ၀ မှာတင် ဂေါတမ ဘုရားရဲ့ သာသနာမှာ ပထမဆုံး တရားရသူ ဖြစ်မယ် ဆိုတာလဲ သူ့ကိုယ်သူ သိနိုင် ပါတယ်။ ဒီတော့ မြတ်စွာဘုရား အလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထ မင်းသား တောထွက်တော့ သူတို့ငါးဦး အတူတူ နောက်ကနေ လိုက်သွား ကြပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ဒုက္ကရ စရိယာ ကျင့်စဉ် မှာတောင် ရေပူ ရေအေး ကပ်ပြီး စောင့်နေကြ ပါသေးတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက အကျင့်မှားကို ဆင်ခြင်မိပြီး အစားပြန် စားတော့ သူတို့ သံသယ၀င်ပြီး ဘုရားလောင်းကို စွန့်ခွာ ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားပွင့်မှာ သေချာ တာကို သိနေတဲ့ သူတို့ဟာ ဘုရား ပထမဦးဆုံး တရားဦး ဟောမယ့် မိဂဒါဝုန် တောမှာ ရသေ့ဝတ်ရင်း သွားစောင့် နေပါတော့တယ်။ စောင့်နေတဲ့ သူတို့ဆီကို ဘုရားက ကြွလာပြီး တရားဟော တော်မူ ခဲ့သလို သူတို့ ငါးဦးလုံးလဲ ရဟန္တာများ ဖြစ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဗေဒင် ပညာကို အသုံးချနည်း လေးပါပဲ။ သည်တော့ ကျွန်မတို့လဲ သူ့ကို နမူနာ ယူပြီး ဗေဒင်ကို အသုံးချခံ ပညာ တစ်ရပ်လို သဘောထားပြီး အသုံးဝင်အောင် အသုံးပဲ ချကြပါစို့။ အသုံး ချစရာ ပညာဟာ ကိုးကွယ် စရာ မဟုတ်ပါကြောင်း သည်မှာ တခါတည်း ပြောခဲ့ချင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တလက်စတည်း ကျွန်မရဲ့ သုဉ်းသုံးပါးနဲ့ ယတြာ သုံးမျိုး ဆောင်းပါးမှာ ကိုဖြိုးရဲ့ မှတ်ချက်လေး ကို အဖြေပြန်ချင်ပါတယ်။ ကိုဖြိုးက ဗုဒ္ဓနဲ့ ဓမ္မ ယတြာ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကို မကြိုက်ပါဘူး။ ဘုရားရဲ့ တရား တော် တွေကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးတာပဲ ဖြစ်စေချင်ပြီး ယတြာ တစ်ရပ်လို အသုံးချ တာကို မနှစ်မြို့နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မလဲ တကယ်တော့ ဘုရားရဲ့ တရားတော် တွေကို ရိုရိုသေသေ ကျင့်သုံးတာကိုပဲ လိုလား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ အခြေအနေမှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဂမ္ဘီရနဲ့ ဗေဒင်၊ အထက်လမ်းကျင့်စဉ်တွေ တရားလွန် လွှမ်းမိုး နေတာကို စိတ်မကောင်း စဖွယ် တွေ့နေရတာ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ သည်လို အခြေအနေ မှာ ဘုရား တရားလို့ တိုက်ရိုက်ပြောရင် လှည့်ထွက် သွားမယ့်သူ များနေပါတယ်။ လူတွေဟာ ယတြာ တစ်ရပ် ကို ထွက်ပေါက် တစ်ခုလို သဲကြီးမဲကြီး နောက်က လိုက်နေချိန်မှာ တရားကို ထိုးပေးရင် မယူနိုင်ပဲ လှည့်ထွက်သွားခဲ့ရင် လုံးဝ မရရုံသာ ရှိပါမယ်။ ဒါကြောင့် တရားတော်တွေကို ယတြာတစ်ရပ် လောက် တောင် အားမကိုးနိုင် ဖြစ်နေတဲ့ သည်လူတွေကို ရွယ်စူးပြီး ယတြာ ခေါင်းစဉ်တပ် ဆောင်းပါးမှာ တရား တော် တွေရဲ့ အစွမ်းကို ထည့်ရေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အနာထပိဏ် သူဌေးသား မောင်ကာဠလို ပိုက်ဆံအတွက် တရားနာရင်း သောတာပန် ဖြစ်ခဲ့သလို ဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထည့်ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။ လင်းနို့သား ငါးရာတောင် တရားသံကို ကြည်ညိုစိတ် ဖြစ်ရုံနဲ့ လူ့ဘ၀ရောက် တော့မှ ပဌာန်း တရားကို နာကြားရာမှာ အထုံပါ ခဲ့ဖူးလို့ တရားအဆုံးမှာ ရဟန္တာ ငါးရာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အထိ စွမ်းတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေကို ဘယ်လိုနည်း နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အထုံပါ စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ အဲဒီ ဆောင်းပါးကို ရေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဓမ္မ တွေကို တလွဲအသုံးချစေချင်တဲ့ စိတ်စေတနာ လုံးဝ မရှိခဲ့ ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဓမ္မ တွေရဲ့ တန်ဖိုးကို ယတြာ တစ်ရပ် အဖြစ် အဆင့် နှိမ့်ချ ပစ်တာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
မြတ်စွာဘုရားဟာ သူ့ရဲ့ အဖေတူ အမေကွဲ (အမေသာ ကွဲသော်လည်း သူ့အဒေါ်ရင်း ဖြစ်သူ) ညီတော် နန္ဒရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်မှာ သတို့သားကို သပိတ်ထမ်းပြီး ကျောင်းကို လိုက်ပို့ခိုင်းပြီး တခါတည်း ရဟန်းပြု ပေးခဲ့စဉ်က ညီတော်နန္ဒဟာ မပျော်နိုင်ဘဲ လူထွက်ချင် နေချိန်မှာ နတ်သမီးနဲ့ မျှားခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ သတို့ သမီးထက် အဆရာထောင်ချီ လှပသူ နတ်သမီးများကို ပြပြီး ရဟန်းတရားအားထုတ်ရင် နတ်သမီး ရနိုင် တယ်လို့ ပရိယာယ် ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ တရားမရရင်တောင် သီလကြောင့် နောက်ဘ၀မှာ အနည်းဆုံး နတ်ပြည် ရောက်နိုင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အားထုတ်ရင်း ညီတော်နန္ဒ ရဟန္တာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသဘော တရား လေး အတိုင်းပါပဲ။ သတို့သမီး သိပ်လွမ်းနေတဲ့ ညီတော်ကို အသုဘ ကမ္မဌာန်း သွားပေးလို့ အရာမထင် နိုင်သလို ယတြာကို သိပ်တောင့်တ နေတဲ့ လူများစုကြီးကို တရားအတင်းနာခိုင်း ကျင့်သုံးခိုင်းလို့ မရနိုင် ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘုရားက သူ့တရားတော်ကို မကိုးကွယ်ခိုင်းဘဲ ကျင့်သုံးခိုင်းတာပါ။ ဘုရားကို တစိမ့်စိမ့် ထိုင်ကြည့် ကိုးကွယ်နေတဲ့ ၀က္ကလိရဟန်းကို နှင်ထုတ်ပြီး တရားတော်ကို မကျင့်သုံးရင် အချည်းနှီးသာ လို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် တရားတော်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ နည်းမှတပါး သံသရာမှ ထွက်မြောက်စရာ အခြား အားကိုးရာမရှိ ဆိုတာကမှ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် အစစ်ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မရဲ့ ဆောင်း ပါး ဖြစ်တဲ့ သုဉ်းသုံးပါးနဲ့ ယတြာ သုံးမျိုးကို ဆိုလိုရင်း မပျောက်စေဖို့ တခါတည်း ဒီမှာပဲ ဆက်ရှင်း ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာ တစ်ခုက တရားတော် အစစ်အမှန်တွေဟာ ဘာအတွက်ပဲ ကျင့်သုံးတာ ဖြစ်ပါစေ၊ စေတနာ မှန်ရင် ကောင်းကျိုး ပေးတာ အမှန် ပါပဲရှင်။
Labels: ခွန်မြလှိုင်, အတွေး အမြင်
Saw Joseph said...
Buddhism is an atheist religion.
Is that all about you know?
Do not expect any response to this comment fromaperson of subnormal intelligence who wants to make and see the Religion Crisis or Strikes among us, MM bloggers.
Bear in your mind that we are taking serious care to ignore such comments trying to divert our greatest concern on 8888!
Keep on believing in whatever you beleive in!
Thakin Myo said...
Yes that's right Mg Yin. We dont need any other ethnic groups or any other religions beside buddhism in our country. Myanmar is only for our Mahar Bamars I think Saw Joseph isaKaren. what i wanna tell him is you better need to findagood refugee camp in Thailand. Our tatmadaw is not going to tolerate anyone who want to dissolve our country.
Long Live Mahar Bamar.
Ko Mg Yin said...
စောဂျိုးဇက် နဲ့ သခင်မျိုး တစ်ယောက်ထဲဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
အပေါ်ကအင်္ဂလိပ်ကို ရေးထားနားမလည်ဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်ထင်လို့ မြန်မာလို ရေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုး၁၀၀% ပါ။ မဟာဗမာဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲ။
ကရင်လဲကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ညီအကို ၊ ကယား၊ရှမ်း၊ကချင်၊မွန်၊ရခိုင် အားလုံးတမြေထဲနေကြတယ်။ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိတဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးကြောင့်ဘာသာ တရားနဲ့ လှည့်လုပ်ကြံတဲ့ခေတ်က ခေတ်ဆွေးမှာကျန်ခဲ့ပါပြီ..လူမျိူးအားလုံးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်။ ဘာသာတိုင်းဟာကောင်း မွန်တာတွေလုပ်ဖို့ သွန်သင်တယ်။ ခင်ဗျားလို သခင်မျိုး နာမည်နဲ့ တစ်မျိုး..စောဂျိုးဇက် တစ်သွယ်..စိုင်းဂျိုးဇက်တနည်း တိုက်ပေးတဲ့ ဟိုလှည့်တိုက်..ဒီလှည့်တိုက်ဗျူဟာ ဆိုတာ ဦးနေ၀င်းနဲ့ နအဖအာဏာရှင် နောက်မြီးဆွဲတွေအလုပ်ပါ.
ဒီပြန်ကြားချက်နောက်ဘာမှထပ်ကြားရဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့ တော့..
yes, you are right , Ko Mg Yin they can be our brothers if they accept what we believe. what about Kalars? are you gonna accept Kalars as your brothers?
This is notachallange space but you can do as your favor . But if you want to fright you should be chose any other topic .
There is no more nationalty.
We want Reunion.
if you wanna fright me ....
welcome to my mail....
21 moe swe
hi 21. what did you mean "there is no more nationalty"?? Did you mean "nationalism"?? I didnt get it what u meant.
ဆိုတော့ တော်ဝင်ဗမာကြီးးပေါ့ ။
ဗမာလိုပြောတာတော့ နားလည်မယ်ထင်ရဲ့ ။
အိပ်မက်အိမ်ရဲ့ Block နဲ့ comment delete မထားတာက ခင်းဗျားနဲ့ကျမှ ပြင်ရမယ်ထင်ရဲ့ ။
mail လိပ်စာပေးထားရက်နဲ့ စာမျက်နှာပေါ်မှာ အော်ချင်တာက ခင်ဗျားရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ထင်ရဲ့နော် ။
သခင်မျိုးဟေ့ လို့ ပုဆိုးခြုံထဲက လက်သီးပုန်းပြနေယုံနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး ပေါ်ဆန်းမွှေး ထမင်း နေ့တိုင်းစားနိုင်ရင် ....
မိသားစု ထမင်းနပ်မှန်အောင် အသဲအသန် ရုန်းကန်နေကြရတဲ့ သူတွေအတွက် ခင်ဗျားရဲ့ ကခင်မျိုးဆိုတဲ့ စကားက ဘဲဥ ၊ ကြက်ဥ တစ်လုံးလောက် တန်ဖိုးရှိရဲ့လား ။ ယခင့် ... ယခင် သမိုင်းမှာ တော်လှန်ရေး ခေတ်က ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အနှစ်သာရတွေ ...
ခင်ဗျားကြောင့် ပျက်နေပါဦးမယ် ။